laamaha amaanka dalka kenya oo badi goobayo rag afduub geystay | Risala FM-The Voice of Horn Africa
laamaha amaanka dalka kenya oo badi goobayo rag afduub geystay
2 qof oo ganacsato ah oo ay afduubteen burcad ka qowleysata wadooyinka magaalada Nakuru ayaa lagu soo waramayaa in ay wali maqanyihiin, iyagoo aan la garaneynin halka lagu heysto.
Ciidamada amaanka ayaa ku guda jira howlgallo baaxad leh oo lagu baadi goobayo dadkaasi ganacsatada ah ee la qafaashay maalintii Jimcada xili ay howl maalmeedkooda caadiga ah wateen.
Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in Labada qof ee maqan oo lagu kala magacaabo Joseph Chege iyo saaxiibkiis Simon Wachira ay kaxeysteen dad ku labisan dhar caadi ah isla markaana watay gaari aan wax astaan ah lahayn.
Qoysaska ay kasoo jeedaan labada ruux iyo dhalinyarada deegaanka ayaa sheegay in ay rumeysanyihiin in ciidamada booliska ee aagaasi ka howl gala ay ku lug leeyihiin afduubkaasi.
Arrintaan oo ay iska fogeeyeen booliska ayaa sababtay in ay qaar ka mid ah wadooyinka Nakuru ka dhacaan mudaharaadyo ay sameynayaan shacab careysan.
Saraakiisha booliska ayaa shalay sheegay in aysan waxba ka ogeyn halka ay ku maqanyihiin dadka la la’yahay, hase ahaatee ay ku dadaalayaan sidii ay u heli lahaayeen.
Taliyaha ciidamada dambi barista CID-da ee Nakuru James Lelia ayaa sheegay in aysan faahfaahin ka bixin Karin howlaha ay ilaa iyo hadda arrintaas ka qabteen.
Xildhibaanka bariga Nakuru David Gikaria ayaa sheegay in uu arintaan ku war galiyay taliyaha guud ee ciidamada booliska dalka Joseph Boinett.